165 milyan oo macaamiil ah ayaa leh Spotify | Waxaan ka socdaa mac
165 milyan oo macaamiil ah ayaa leh Spotify
Halka Apple ay qaadatay in ka badan laba sano scusbooneysiinta tirada macaamiisha adeeggaaga qulqulka muusikada, Apple Music, shirkadda Iswidishka ah ee Spotify waxay sii wadaa kordhinta tirada isticmaaleyaasha, labadaba nooca bilaashka ah iyo kan lacagta la siiyay. Marka loo eego tirooyinkii ugu dambeeyay ee ay shirkaddu shaacisay, tirada macaamiisha bixisa waa 165 milyan.
Haddii 165 milyan ee macaamiisha ah ee mushahar qaata, waxaan ku darnaa 200 milyan oo isticmaaleyaal ah nooca bilaashka ah, waxaan aragnaa sida barxadda Iswiidhan ay u leedahay 365 milyan oo bil walba saldhig isticmaala ah, taas oo ka dhigan koror dhan 22% marka loo eego isla muddadaas sanadkii ka horreeyay.
Spotify ayaa ku guuleysatay seddexdii bilood ee la soo dhaafay, 7 milyan oo macmiil oo cusub, laga soo bilaabo 158 milyan oo ay haysteen 31 -kii Maarso ilaa 165 milyan laga bilaabo Juun 31, 2021. Korodhka macaamiisha lacagta qaata ayaa kordhay 20% marka la barbar dhigo isla muddadii sannadkii hore.
Sida laga soo xigtay shirkadda, waxay hadda haysataa in ka badan 3 milyan oo warbaahin ah barnaamijkeeda, madal si aad ah muhiim ugu sii kordheysa oo u oggolaan doonta shirkadda inay mustaqbalka yeelato ilo dakhli leh faaiido badan.
Ka mid ah isticmaaleyaasha isticmaalay boodhadhka rubacii labaad, isbedelada isticmaalku way xoog badnaayeen (koror boqolkiiba 95% sanadkii-sanadka oo dhan iyo in ka badan 30% sanadkiiba isticmaale), halka sicirka usbuuclaha iyo billaha ah ay gaareen waqtiga oo dhan. sare Intii lagu gudajiray rubucii, saamiga boodhadhka guud ahaan saacadaha isticmaalka ee barxadeena sidoo kale wuxuu gaadhay heerkii ugu sarreeyay.
Spotify ayaa lagu calaamadeeyay yoolka ah in la gaaro 400 milyan oo isticmaale firfircoon bil kasta dhamaadka sanadkan. Kuwaas oo ah 400 milyan ee isticmaaleyaasha firfircoon, wuxuu filayaa inta u dhexeysa 177 iyo 181 inay bixin doonaan macaamiisha. Haddii aan tixgelinno in rubuc kastaa ay helayaan inta udhaxeysa 7 iyo 9 milyan oo macaamiil cusub ah, saadaasha kobaca Spotify waa kuwo macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » 165 milyan oo macaamiil ah ayaa leh Spotify
Codsi shaqo Steve Jobs ayaa lagu xaraashay ku dhowaad saddex boqol oo kun oo yuuro
Maaskaro ayaa mar kale khasab ka ah Dukaanka Apple ee Maraykanka